तुलसीपुरमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, स्थानीय त्रसित, कस्तो छ अबस्था ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
तुलसीपुरमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, स्थानीय त्रसित, कस्तो छ अबस्था ?
दाङको तुलसीपुरमा अज्ञात समूहले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दै हिंडेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ गोरौरा हुँदै वडा नं. १० सम्म उक्त समूहले सोमबार बेलुकीपख अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दै हिंडेपछि स्थानीय गाउँले भयवित बनेका हुन् ।
टेण्डर पार्न तर्साएको अनुमान
तुलसीपुर १० नवीन कवर वर्षोंदेखि पेसाले खोलामा बालुवा गिट्टीको काम गर्दै आइरहेका हुन् । उनले तुलसीपुरको पातुखोलामा वर्षौंदेखि जिल्ला विकास समिति र पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समितिले खोल्ने गरेको टेण्डर अनुसार नदीजन्य वस्तुको व्यापार गर्दै आएका छन् ।
मंगलबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर अन्तर्गत पर्ने बालुवा गिट्टीको लागि प्रमुख स्रोत मानिने ग्वारखोला, पाखुखोला र बबई नदी लगाएमा बालुवा गिट्टीको टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
मध्यान्ह १२ बजेसम्म टेन्डर आह्वानको समय तोकिएको छ भने मंगलबार नै टेन्डरसमेत सार्वजनिक गर्ने उपमहानरपालिकाले जानकारी दिएको छ । खोलाको टेण्डरमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने र हैकम कायम गर्न चाहने अर्को कुनै समूहले तर्साउन तथा धम्काउने उद्देश्यका साथ अन्धाधुन्ध फायरिङ गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।